राजधानि छाडेर जाने यात्रुको भीड ; काउन्टरमा टिकट अभा’व - Nepal Times Online
Posted on April 28, 2021 April 28, 2021 Author USER-1	Comment(0)
काठमाडौं/ गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा घर जाने यात्रुको भीड’भाड बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले वैशाख १६ गते बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्ता निषे’धाज्ञा लगाउने निर्णय गरेसँगै घर जाने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।
अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बा’ध्य रहेका सार्वजनिक यातायात सोमबारको उक्त निर्णयसँगै भरि’भराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले सोमबार दुई दिन यात्रुलाई घर जाने समय दिएको बताएसँगै आज बिहानैदेखि नयाँ बसपार्कमा घर जान यात्रुहरुको भीड लागेको हो ।
लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपा’एको यात्रुले गु’नासो गरेका छन् । बझाङ जानका लागि टिकट काट्न सोमबार साँझ नयाँ बसपार्क पुगेका जयराज जोशीले टिकट नपाएको गुनासो गर्नुभयो । लामो दूरीका सवारी साधन थोरै भएका कारण पनि नयाँ बसपार्कमा टिकट अभा’व भएको हो ।
पछिल्लो समय नयाँ बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बसपार्क निर्माणका लागि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रा लि लागेको छ । प्रा लि का अध्यक्ष इञ्जिनीयर दीपक कुँवर नयाँ बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि आफूले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
नयाँ बसपार्कमा हाल सञ्चालन भएका टिकट काउन्टरसमेत ब’न्द गरिएको छ । टिकट काउन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि वैशाख १ देखि नयाँ बसपार्कभित्रका सम्पूर्ण काउन्टर ब’न्द गरिएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।
नेपाली चेलिको भारतमा ब’लत्कार पछी विभत्स ह’त्या, परिवारलाई दवाब घटनाको प्रमाण नष्ट ।
फाल्गुन १ काठमाण्डौ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका- ३ खुरखुरे फाँटाकी १२ वर्षीया बालिका सुमित्रा वि.कको भारतको विहारराज्यस्थित मोतिहारी जिल्लाको चैनपुरमा माघ ८ गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घटनाको प्रमाण मेटाउन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले जर्वजस्ती दबाब दिँदै बालिकाको शवलाई जलाउन लगाएको पीडित परिवारको आरोप छ। बालिको मृत्यु रहस्यमय देखिन्छ। चुक्कुल लगाएको कोठाभित्र बालिकाको मृत शरिर भेटिएको छ। […]
दस बर्ष अगाडी गर्ल फ्रेण्डलाई पाचथरको एक होटलमा गोली हानी ह*त् या गरि फरार रहेको हिजो राती मुलपानी काठमाडौंबाट पक्राउ
पाँचथरमा प्रेमिकालाई गोली हानेर हत्या गरेपछि भागेका युवालाई प्रहरीले १० वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङको छाँगे–१ घर भएका कुमुकहाङ लिम्बु आङबुहाङ छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँसँगको टोलीले काठमाडौंको मुलपानीबाट गएराति उनलाई पक्रेको हो ।हत्या आरोपीलाई मुलपानीबाट पक्राउ गरेर पाँचथरपठाउन लागिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले बताए । ०६७ मा […]
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद पुनःस्थापना नभए नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। संसद पुनःस्थापना गरेर आफु प्रधानमन्त्री नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने उद्घोष गरेका हुन्। आफु पक्षिय केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै उहाले संसद पुनर्स्थापनाका लागि कडा संघर्ष गर्ने र नेपाल बन्दसम्म पनि हुनसक्ने उल्लेख गरे। ‘आन्दोलनमा नेपाल बन्दसम्म पनि हुनसक्छ […]
नेपालमा लायन्सको गैरकानुनी धन्दा र विदेशीएको करोडौँ रकम||खबर भित्रको खबर (भिडियो)
डा. सुरेन्द्रको छुवाछुत र देश परिबरेशको लागी रगत उमाल्ने भाषण | भारी बोक्नेको हिम्मतीलो छोरो हुँ | नदेखिएको रूप (भिडियो)
हिन्दु धर्मको अबशेष पनि मेट्न चाहानेहरु कता जादैछ हाम्रो समाज ?
मापसे गरी आफ्नै ७० बर्षिय आमाको ह#त्@या ।
२५ गतेबाट सम्पर्कविहीन दिपेश खनाललाई खोजिदिन परिवारको आग्रह ।